Nkwalite Nkwalite SameSite nke Google Maka Nkwado Ihe Mere Ndị Na-ebipụta Akwụkwọ Ji Kwesịrị Mogagharị Na Cookies Maka Icheta Ndị Na-ege Ntị | Martech Zone
Nkwalite nke Nmeghari Uzo nke Google na Chrome 80 na Tuesday, Feb. 4 na-egosi ọzọ ntu n'ime igbe ozu maka kuki ihe nchọgharị ndị ọzọ. Na-esochi ụkwụ Firefox na Safari, ndị gbochiela kuki ndị ọzọ na ndabara, yana ịdọ aka ná ntị kuki nke Chrome, na SameSite kwalite n'ihu na-ejidesi ojiji nke kuki ndị ọzọ nke ọma maka ndị na-ege ntị.
Mmetụta na Ndị Bipụtara Akwụkwọ
Mgbanwe ahụ ga-emetụta ndị na-ere ahịa mgbasa ozi nke na-adabere na kuki ndị ọzọ nke ukwuu, mana ndị mbipụta na-adịghị edozi ntọala saịtị ha iji soro àgwà ọhụrụ ahụ ga-emetụta. Ọ ga - egbochi naanị itinye ego na ọrụ mmemme nke ndị ọzọ, mana ịghara ime ihe a ga - etinyekwa mgbalị iji soro omume onye ọrụ bara oke uru maka ijikwa ọdịnaya dị mkpa.
Nke a bụ eziokwu ọkachasị maka ndị mbipụta nwere ọtụtụ saịtị — otu ụlọ ọrụ anaghị aha otu saịtị. Nke ahụ pụtara, site na mmelite ọhụrụ ahụ, kuki ejiri gafee ọtụtụ njirimara (obe-saịtị) ka a ga-ewere dị ka ndị ọzọ, ya mere egbochi ya na-enweghị ntọala kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ ezie na ndị mbipụta ga-ahụrịrị anya na emelitere saịtị ha site n'àgwà ndị kwesịrị ekwesị, mgbanwe a dị mfe nke Google kwesịkwara ime ka ndị mbipụta chee echiche ugboro abụọ maka ntụkwasị obi ha dabere na ndị ọrụ kuki. N'ihi gịnị? N'ihi ihe abụọ:
Ndị na-azụ ahịa na-enwewanye nchegbu banyere otu ụlọ ọrụ si eji data ha.
Enwere ụzọ dị ezigbo mma iji wuo eserese njirimara.
N'ihe banyere nzuzo data, ndị nkwusa na-eche ihu ihu abụọ ihu. Ihe omuma ohuru na egosi na ndị na-azụ ahịa chọrọ ọdịnaya nke ahaziri iche aro ndị enwere ike ịbute naanị site na ịnakọta na nyochaa data omume ha. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị na-azụ ahịa nwere nnukwu obi abụọ banyere ịkekọrịta data ahụ. Mana, dị ka ndị nkwusa mara, ha enweghị ike ịnwe ya ma ụzọ abụọ. Free ọdịnaya na-abịa na ọnụ ahịa, na obere ụgwọ akwụ ụgwọ, naanị otu ụzọ ndị ahịa ga-esi akwụ ụgwọ bụ data ha.
Ha dị njikere ime otú ahụ - 82% ga - ahọrọ ịhụ ọdịnaya akwadoro karịa ịkwụ ụgwọ maka ndenye aha. Nke ahụ pụtara na ọrụ dịịrị ndị nkwusa ịkpachapụ anya ma na-echebara otu ha si eji data data.
Ọzọ Dị Mma: Email
Mana, ọ gbanwere, enwere ụzọ dị irè karị, ntụkwasị obi na ụzọ ziri ezi iji wuo eserese njirimara njirimara karịa ịdabere na kuki: adreesị ozi-e. Kama ịhapụ kuki, nke na-enye ndị ọrụ echiche na a na-ele ha anya, nyochaa ndị ọrụ edebanyere aha site na adreesị ozi-e ha, na ịdekọ adreesị ahụ na otu aha, amaara aha ya bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ntụkwasị obi nke itinye aka na ndị na-ege ntị. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Email abanyela - Ndị ọrụ debanyere aha iji nata akwụkwọ akụkọ gị ma ọ bụ nkwukọrịta ọzọ, na-enye ha ikike ka gị na ha kwurịta okwu. Ha na-achịkwa ma nwee ike ịpụ apụ oge ọ bụla.
Email ziri ezi - Kuki ga - enye gị echiche ọjọọ gbasara onye ọrụ dabere na omume — afọ ole, ọnọdụ, ọchụchọ na omume pịa. Na, ha nwekwara ike ịdị mfe muddi ma ọ bụrụ na ihe karịrị otu onye na-eji ihe nchọgharị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ezinụlọ niile na-ekerịta laptọọpụ, mama, nna na akparamagwa ụmụaka na-abanye n'otu, nke bụ mbibi ezubere iche. Mana, adreesị ozi-e jikọtara ya na otu onye kpọmkwem, ọ na-arụ ọrụ n'ofe ngwaọrụ. Ọ bụrụ n'iji ihe karịrị otu ngwaọrụ, ma ọ bụ nweta ngwaọrụ ọhụrụ, email ka na-arụ ọrụ dị ka ihe nchọpụta na-aga n'ihu. Nnọgidesi ike ahụ na ike ijikọ pịa na omume ọchụchọ na profaịlụ onye ọrụ ama ama na-enye ndị mbipụta ohere iwulite akụ na ụba, nke ziri ezi banyere mmasị na mmasị nke onye ọrụ ahụ.
Email tụkwasịrị obi - Mgbe onye ọrụ debanyere adreesị ozi-e ha, ha maara nke ọma na a ga-agbakwunye ha na ndepụta gị. O gabigara-ha ejiri akpachapụ anya nye gị nkwenye, n'adịghị ka kuki ndị na-adị ka ọ bụ gị na-ahụ omume ha n'ubu ha. Na, ọmụmụ ihe na-egosi na ndị ọrụ nwere ike 2/3 yikarịrị ka ịpị ọdịnaya - ọbụlagodi mgbasa ozi-sitere na onye mbipụta ha tụkwasịrị obi. Kwaga na-ezubere iche dabere na email nwere ike inyere ndị mbipụta aka ịnọgide na ntụkwasị obi ahụ, nke bara oke uru na akụkọ adịgboroja taa, gburugburu ebe enwere obi abụọ.
Email na-emepe ụzọ maka ọwa ndị ọzọ n'otu n'otu - Ozugbo imosiri mmekọrịta siri ike site na ịmara onye ọrụ yana gosipụta na ị ga-ewepụta ọdịnaya dị mkpa na nke ahaziri maka ọdịmma ha, ọ dị mfe ịmekọrịta ha na ọwa ọhụrụ, dịka ọkwa ọkwa. Ozugbo ndị ọrụ tụkwasịrị obi na ọdịnaya gị, usoro ziri ezi na ndụmọdụ, ha nwere ike ime ka mmekọrịta ha na gị gbasaa, na-enye ohere ọhụụ maka itinye aka na itinye ego.
Ọ bụ ezie na imelite saịtị iji rube isi na mgbanwe SameSite nwere ike ịbụ ihe mgbu ugbu a, ma nwee ike belata ego ndị na-ebipụta akwụkwọ, eziokwu na-ebelata ịdabere na kuki ndị ọzọ bụ ihe dị mma. Ọ bụghị naanị na ha abaghị uru ma a bịa n'ịchọta mmasị onye ọrụ ọ bụla, mana ndị ahịa na-enwekwu obi abụọ.
Gagharị ugbu a gaa usoro ntụkwasị obi, ntụkwasị obi dịka email iji mata ma lekwasịrị ndị ọrụ anya na-enye azịza nke ọdịnihu nke na-eme ka ndị mbipụta na-achịkwa mmekọrịta ndị na-ege ha ntị na okporo ụzọ, kama ịdabere kpamkpam na ndị ọzọ.
Tags: chromiumndebanye aha emailGoogle chromeizu iketracking